Natolotra ny Jiosy i Jesosy ary Nentina Hovonoina | Fiainan’i Jesosy
Natolotra ny Jiosy i Jesosy ary Nentina Hovonoina
MATIO 27:31, 32 MARKA 15:20, 21 LIOKA 23:24-31 JAONA 19:6-17
NIEZAKA NANAFAKA AN’I JESOSY I PILATO
NOHELOHINA I JESOSY ARY NENTINA HOVONOINA
Efa nampijalina sy nohambaniana i Jesosy. Niezaka nanafaka azy i Pilato, saingy tsy nety niova hevitra ny lehiben’ny mpisorona sy ny namany. Ny hamono azy ihany no masaka tao an-tsain’ireo. Tsy nitsahatra niantsoantso izy ireo hoe: “Fantsiho amin’ny hazo fijaliana izy! Fantsiho!” Hoy àry i Pilato: “Entonareo izy ka fantsiho amin’ny hazo fijaliana, fa izaho tsy mahita izay fahadisoany.”—Jaona 19:6.
Tsy naharesy lahatra an’i Pilato mba hamono an’i Jesosy noho ny antony politika ny Jiosy, ka nitady antony ara-pivavahana indray. Naveriny ilay fiampangana an’i Jesosy teo anatrehan’ny Fitsarana Avo Jiosy, dia ilay hoe nanevateva an’Andriamanitra izy. Hoy izy ireo: “Izahay manana lalàna, ary araka izany lalàna izany, dia tokony ho faty izy, satria nanao ny tenany ho zanak’Andriamanitra.” (Jaona 19:7) Vaovao tamin’i Pilato io fiampangana io.
Niverina tao an-dapa i Pilato ary nitady hevitra hanafahana an’ilay lehilahy efa niaritra ny mafy. Nanonofy momba an’io lehilahy io koa ny vadin’i Pilato. (Matio 27:19) Nampangain’ny Jiosy indray izy io hoe milaza ny tenany ho “zanak’Andriamanitra.” Efa fantatr’i Pilato fa avy any Galilia i Jesosy, nefa hoy izy: “Avy aiza ianao?” (Lioka 23:5-7; Jaona 19:9) Nieritreritra angamba izy hoe nety ho efa nisy taloha i Jesosy ary irak’Andriamanitra.
I Jesosy mihitsy no nilaza tamin’i Pilato fa mpanjaka izy nefa tsy anisan’ity tontolo ity ny Fanjakany. Tsy te hilaza tsipiriany fanampiny izy ka nangina. Nandona ny hambom-pon’i Pilato izany ka tezitra izy ary niteny hoe: “Tsy miteny amiko ve ianao? Tsy fantatrao angaha fa manana fahefana hanafaka anao aho, ary manana fahefana hamantsika anao amin’ny hazo fijaliana?”—Jaona 19:10.
Namaly fotsiny i Jesosy hoe: “Tsy ho nanana fahefana amiko velively ianao raha tsy nomena anao avy tany ambony izany. Koa izay nanolotra ahy taminao no meloka kokoa.” (Jaona 19:11) Toa tsy nisy olona iray tena noeritreretin’i Jesosy teo. Te hilaza kosa izy fa manan-tsiny kokoa noho i Pilato i Kaiafa sy ny mpiray tsikombakomba taminy ary Jodasy Iskariota.
Nanaitra an’i Pilato ny fihetsik’i Jesosy sy ny teniny ary vao mainka izy natahotra sao irak’Andriamanitra tokoa i Jesosy. Nanandrana nanafaka azy indray àry izy. Nilaza zavatra hafa tsy maintsy ho nampahatahotra an’i Pilato anefa ny Jiosy avy eo. Norahonan’izy ireo i Pilato hoe: “Tsy naman’i Kaisara ianao raha hafahanao io, satria izay manao ny tenany ho mpanjaka dia manohitra an’i Kaisara.”—Jaona 19:12.
Nentin’ilay governora teo ivelany indray i Jesosy ary nipetraka teo amin’ny fitoeran’ny mpitsara izy sady niteny hoe: “Io ny mpanjakanareo!” Tsy niova hevitra mihitsy anefa ny Jiosy fa niantsoantso hoe: “Vonoy io! Vonoy io! Fantsiho amin’ny hazo fijaliana izy!” Nitalaho i Pilato hoe: “Hofantsihako amin’ny hazo fijaliana ve ny mpanjakanareo?” Efa ela no tsy tian’ny Jiosy ny fitondran’ny Romanina, nefa sahy niteny ny lehiben’ny mpisorona hoe: “Tsy manana mpanjaka ankoatra an’i Kaisara izahay.”—Jaona 19:14, 15.
Tsy nitsahatra nangataka ny hamonoana an’i Jesosy ny Jiosy. Natahotra àry i Pilato ka nilefitra ary nanolotra an’i Jesosy mba hovonoina. Nesorin’ny miaramila ilay lamba mena midorehitra teny amin’i Jesosy ary nampanaoviny azy indray ny akanjony. Nentin’izy ireo i Jesosy ary izy ihany no tsy maintsy nitondra ny hazo fijaliany.
Zoma 14 Nisana tamin’izay, ary efa nanakaiky ny mitataovovonana. Efa tsy natory i Jesosy nanomboka ny alakamisy vao maraina be ary nisesisesy ny fahoriana nanjo azy. Tsy nanana hery hibatana an’ilay tsato-kazo navesatra be intsony àry izy. Sendra nandalo i Simona avy any Kyrena, tanàna tatsy Afrika, ka noteren’ny miaramila hitondra an’ilay tsato-kazo tany amin’ny toerana hamonoana an’i Jesosy. Maro no nanaraka teny, ary nisy nitomany sy nikapo-tratra noho ny alahelo.
Hoy i Jesosy tamin’ireo vehivavy nalahelo azy: “Aza mitomany ahy intsony, ry zanakavavin’i Jerosalema, fa ny tenanareo sy ny zanakareo itomaniana. Ho avy mantsy ny andro hilazan’ny olona hoe: ‘Sambatra ny vehivavy momba, sy ny kibo tsy niteraka ary ny nono tsy ninonoan-jaza!’ Dia hanomboka hilaza amin’ny tendrombohitra izy ireo hoe: ‘Mianjerà aminay!’, ary amin’ny havoana hoe: ‘Saròny izahay!’ Koa raha izany no ataon’izy ireo amin’izao hazo mbola mando izao, mainka fa rehefa maina ny hazo?”—Lioka 23:28-31.
Ny firenena jiosy no tian’i Jesosy horesahina teo. Toy ny hazo efa ho faty nefa mbola misy mandomando kely izy io, satria mbola teo i Jesosy sy ny Jiosy sasany nino azy. Rehefa tsy ho eo intsony izy ireo, dia ho toy ny hazo maty efa maina ilay firenena, satria ho tafasaraka tanteraka amin’Andriamanitra. Hitomany be ny olona rehefa hampiasa ny tafika romanina Andriamanitra mba handringanana an’ilay firenena.
Inona no niampangan’ny mpitondra fivavahana an’i Jesosy?
Inona no nampahatahotra an’i Pilato?
Ahoana no nataon’ny lehiben’ny mpisorona mba handresena lahatra an’i Pilato hamono an’i Jesosy?
Inona no tian’i Jesosy holazaina amin’ilay hoe hazo “mando” ary avy eo “maina”?
Hizara Hizara Natolotra ny Jiosy i Jesosy ary Nentina Hovonoina